tiro madaafiic ah oo lagu garacay Villa Soomaalia iyo Al-Shabaab oo sheegtay | SMC
Home WARARKA MAANTA tiro madaafiic ah oo lagu garacay Villa Soomaalia iyo Al-Shabaab oo sheegtay
tiro madaafiic ah oo lagu garacay Villa Soomaalia iyo Al-Shabaab oo sheegtay
Duhurnimadii Maanta ayaa waxaa agagaarka Xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaliya kusoo dhacay ilaa tira hoobiyeyaal ah oo gaaya saddex,kuwaas oo dhawaqa jugtooda lag maqlay degmooyin ka tirsan Gobolkan Banaadir.
Madaafiicda ayaa warar la helayo waxaa ay sheegayaan inay ku kala dhaceen agagaarka Safaaradda Itoobiya ku leedahay xeyndaabka Madaxtooyada,Xaafad lagu Magacaabo Kaambada oo ku dhegan Xarunta Commando Polizio iyo agagaarka Safaaradda Itoobiya.
In ilaa iyo la xaqiijiyay hoobiyeyaashaas ayaa waxaa ku dhaawacmay hal ruux oo shacab ah,waxaana dad ku sugan goobaha ay madaafiic kusoo dhaceen ay sheegeen inay casbi soo wajahday,kadib markii hoobiyeyaasha ay kusoo dahceen xaafadahooda.
Hay’adaha amniga Soomaaliya weli ka hadlin hoobiyeyaasha Maanta kusoo dhacay xeyndaabka Madaxtooyada Soomaaliya,waxaana hoobiyeyaal horay ugu soo dhacay agagaarka Madaxtooyada sheegtay Ururka Al-Shabaab.
Next articleErgada shirka Dhuusamareeb oo su’aallo adag Hordhigey wasiirka amniga Somaliy